Naya Bikalpa | अधिकांश मेडिकल कलेजहरु वामपन्थी सरकारको नियन्त्रणमा रहेका कारण आफु अनुकुल राख्न चाहन्छन् - Naya Bikalpa अधिकांश मेडिकल कलेजहरु वामपन्थी सरकारको नियन्त्रणमा रहेका कारण आफु अनुकुल राख्न चाहन्छन् - Naya Bikalpa
अधिकांश मेडिकल कलेजहरु वामपन्थी सरकारको नियन्त्रणमा रहेका कारण आफु अनुकुल राख्न चाहन्छन्
प्रकाशित मिती: २०७५ पुष ३०, ०८: ५३: २६
संजय गौतम– सांसद तथा नेपाली काँग्रेस जिल्ला सभापति, बाँके
नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षको भुमिकामा रहेको छ । केन्द्रीय संसदको अधिवेशन सुरु भइरहेको छ । संसदमा अहिले वाईडवडि लगायत सार्वजनिक महत्वको विषयमा सरकार भने बिच्कीन खोजिरहेको छ ।
पौष २२ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक घण्टाभन्दा बढी सार्वजनिक विषयमा संसदमा सम्बोधनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँगेसले सार्वजनिक महत्वको विषयमा प्रश्न गर्न खोज्दा संसदनै अवरुद्ध भयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसद नियमावली अनुसार प्रश्न गर्न पाउने अधिकार हनन् गरको भन्दै संसद समेत अवरुद्ध गरे र सभामुखप्रति खनिए । तरपनि चित्तबुझ्दो जवाफ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँगेसले पाउन नसकेको भन्दै सरकारमाथि आरोप लागिरहेको बेला नेपाली काँग्रेसका नेता एव्म सांसद संजय गौतमसँग नयाँ विकल्प साप्ताहिकका लागि पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अशंः
हालै प्रधानमन्त्रीले संसदमा सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि सम्बोधन पश्चात काँग्रेसले संसद बहिष्कार समेत गरिसकेको अवस्थामा नेपाली काँग्रेस पछि हटेको हो ?
होइन, संसद नियमावली अुनसार प्रतिपक्षले सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि प्रश्न राख्न पाउनुपर्छ त्यो नियमावली भित्रकै कुरा हो । सभामुखले पनि सार्वजनिक महत्वको विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने भनेर संसदलाई जानकारी दिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रश्नको जवाफ नदिएसम्म अगाडि जान हुँदैनथ्यो ।
सभामुखले पनि धेरै पटक रुलिङ गरिसकेर कमिटमेन्ट गर्नुभएको कुरा मसेत पुरा गर्नुभएन । म प्रश्नोतरको कार्यक्रम सुरु गर्छु भनेर पनि भन्नुभएको थियो । संसद सुरु हुनुभन्दा एक घण्टा पहिला प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम सुरु गर्ने हाम्रो नियमावलीमा व्यवस्था छ । सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा मन्त्री अथवा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने जुन व्यवस्था छ, त्यो कार्यान्वयन गर्छु भनेर सभामुखले रुलिङनै गर्नुभएको अवस्थामा पनि हुन सकिरहेको छैन ।
वर्तमान अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस निकै कमजोर हुँदै गएको छ र चुकिरहेको छ भन्छन् नि तपाई के भन्नुहुन्छ ?
तपाईलाई त्यस्तो लागेको होला । नेपाली काँग्रेस कमजोर भएको पनि छैन, काँग्रेस चुकेको पनि छैन । संसदमा नेपाली काँग्रेस जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । कुनैपनि राष्ट्रिय महत्वको विषयमा होस्, अथवा नेपाली जनताको अधिकार हनन् हुने कुराहरुमा संसदमा नेपाली काँग्रेस सचेत छ । हामी खबरदारी गरिरहन्छौं ।
त्यसैले पौष २२ गते हाम्रो संसदमा जुन किसिमको घटना घट्यो, त्यो नेपालको इतिहासमा वास्तवमानै राम्रो घटना थिएन । त्यसकारण जनताका अधिकारहरुलाई र जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्थामा जनताको आवाजलाई दबाउन खोज्ने प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले अभिव्यक्ति दिने अनि जनताका आवाजहरु नसुनिदिने प्रवृत्तिलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरियो । त्यतिबेलादेखि सभामुखको भूमिका पनि हामीलाई निकै चित्त नबुझ्दो खालको रहँदै आएको छ ।
संसदमा सभामुखले गल्ती पनि गर्नुभयो भन्ने, अनि काँग्रेसले रातारात सभामुखको प्रसंशा गर्दै पनि हिँड्ने, कस्तो दोहोरो चरित्र हो यो ?
हाम्रो दोहोरो चरित्र होइन । काँग्रेसले दोहोरो चरित्र गर्दैन । तर सभामुखले संसदको पौष २२ गतेको घटनालाई रियलाइज गर्नुभयो । उहाँले रुलिङ गर्ने पनि कमिटमेन्ट गर्नुभयो । त्यसकारण संसदमा नेपाली काँग्रेस एउटा जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्षी भएको नाताले त्यो कुरालाई एउटा नयाँ ढङ्गबाट संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढिरहेका हौं ।
तर संसदको पौष २२ गतेको घटनामा नेपाली काँग्रेसले जनतालाई झुक्याएर सरकारसँग सम्झौता ग¥यो भन्ने छ नि, तपाई के भन्नुहुन्छ ?
मेरो त्यति ठुलो आपत्ति त होइन ? तर हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षीको नाताले उहाँहरुजस्तो गैर जिम्मेवार चरित्र देखाउन सक्दैनौ । किनकी अहिले उहाँहरु सत्तामा हुनुभएका साथीहरुले हिजो एक किसिमको गलत प्रवृत्ति देखाउनु भएको थियो । उहाँहरुले आफु प्रतिपक्षी भएको बेलामा सडकका रेलिङ भाँच्ने, संसद अवरुद्ध गर्ने, संसदको कुसी भाँच्ने, सरकारका विरुद्ध बक्तव्य बाजी गर्ने, बजेटका बेला अर्थमन्त्रीलाई लछारपछार पार्ने, झोला खोस्ने काम गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तो काम हामी गर्दैनौ । हामी त जिम्मेदार प्रतिपक्षी हौ । हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्छौ । हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अगाडी बढाउन चाहन्छौं । त्यसकारण हामीले जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । रचनात्मक जिम्मेवार प्रतिपक्षी भएर संसदमा प्रस्तुत हुने हो । हामी गैर जिम्मेवार बन्न त सक्दैनौं ।
अहिलेको अवस्थामा नेपाली काँग्रेस कमजोर हुँदै जाने, सरकारले भने जनताको मन जितिरहेको छ भन्ने छ नि ?
कुनै हालतमा होइन । अहिलेको अवस्थामा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ, यो सरकारलाई धेरै काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । वास्तवमा उहाँले कस्तो किसिमको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो ? नेपाली जनताले उहाँहरुलाई यस्तो मौका दिनुभएको छ, नेपाली काँग्रेस जस्तो मुलुकको लोकतान्त्रिक पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षीको रुपमा छ ।
तर यतिबेला यो सरकारले जुन भूमिका खेलिरहेको छ, यो एकदमै हास्याँस्पद छ । न जनताको पक्षमा छ, न राष्ट्रको पक्षमा छ । न यो सरकारले अहिले शान्ति सुरक्षा दिन सकेको छ ? जनताका हेक अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सकेको छैन ।
यसले देश विकासको कामलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । कुरा के हो भने यो अधिनायकवादी सोंचका कारण दुइ तिहाइ बहुमत छ, जे गरेपनि हुन्छ भन्ने हिसाबले हेपाहा र पेलाहा प्रवृत्तिबाट जनताका बीचमा यसको विश्वासनियतामाथि प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ । यो बेलामा नेपाली काँग्रेसले शसक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सदन र सडकमा प्रभावकारी भूमिका खेलेर आम नेपाली जनताको चाहनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
हामी पनि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली जाँदाखेरी तपाईहरुले काँग्रेस पार्टीलाई कसरी चुस्त दुरुस्त गर्नुहुन्छ ? कसरी यो कुरालाई अगाडि बढाउनुहुन्छ । तपाईहरुको महासमितिले पनि राम्रो सन्देश दिएन भनेर साथीहरुले चिन्ता गरिरहनु भएको छ ।
महासमितिको बैठकपछि नेपाली काँग्रेस पार्टी झन गुट–उपगुटमा बाँडिएको छ नि, तपाईलाई के लाग्छ ?
हामीहरु समग्र काँग्रेस निर्माण अभियानमानै छौं । हामीले नेपाली काँग्रेस पार्टीलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाउने योजनामा छौं । महासमितिको बैठकमा हामीहरुले जुन किसिमले आफ्नो भूमिकालाई अगाडि लिएर गएका छौं । त्यसैले केन्द्रीय नेताहरु समेत तलबाटै चुनाव लड्नुपर्ने कुरा उठायौं । समानुपातिक समावेशीलाई पुनः स्थान नदिने बनायौं । संगठनलाई चुस्तदुरुस्त गर्दै, कार्यकर्तामुखी पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रो भूमिका रह्यौ ।
म अहिले दुईवटा भूमिकामा छु, एउटा जिल्ला सभापतिको भूमिकामा छु भने अर्को नेपाली काँग्रेसको सांसदको भूमिकामा पनि छु । हिजो समय र परिस्थितिले मलाई एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा लग्यो । अहिलेको परिस्थितिमा काँग्रेसको पोजीसन देखेर चिन्ता लाग्नु स्वभाविक हो । तर समयलाई कसैले रोकेर रोकिदैन । काँग्रेसलाई कसैले रोक्न सक्दैन । काँग्रेस एउटा यस्तो शक्ति हो, यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकेनौं । अहिलेको लिडरसिपले टाउकोमा टाउको जोडेर काँग्रेस पार्टी व्यवस्थापनमा चिन्तित बनोस् भन्ने हाम्रो इच्छा र चाहना हो ।
यदि यसलाई व्यवस्थित गरेर सशक्त भुमिका निर्वाह गरेर अगाडी बढ्ने हो भने काँग्रेस सँधै प्रमुख भूमिकामा रहिरहन्छ । होइन भने अर्को महाअधिवेशनसम्म कुर्नु बाहेक विकल्प छैन ।
अहिले प्रा.डा. गोविन्द केसीले अनसन सुरु गर्नुभएको छ, त्यो अनसनप्रति नेपाली काँग्रेसको समर्थन रहन सक्छ कि, सक्दैन ?
प्रा.डा. गोविन्द केसीले १६औं पटक सत्याग्रह सुरु गर्नुभएको छ । गगन थापाले समितिमा जुन किसिमले फरक फरक मत राखिसक्नुभयो । त्यो पनि मैले नजिकबाट हेरिहेको छु । त्यस विषयमा पार्टीको आधिकारीक धारणा आउँला । प्रा.डा. गोविन्द केसीले पनि अराजक अभिव्यक्ति पनि दिनुभएन ।
उहाँले गर्दा समाजमा उहाँका पछि लाग्ने मानिसको मन नकुडियोस । कुरा के हो भन्दा सार्वभौम संसदलाई उहाँले जसरी माफ्नो अनुकुलमा लिएर जान खोज्नुभयो, त्यो कुरा चाँही राम्रो होइन । प्रा.डा. गोविन्द केसीका मागहरु आधिकारीक छन्, आधिकारीक मागहरुको पक्षमा हामी छौं ।
उसोभए प्रा. डा. गोविन्द केसीको आधिकारीक माग के–के हुन् त ?
गोविन्द केसीले १६औं पटकसम्म पनि उठाउँदै आउनुभएको मागहरुमा जेहनदार र उपत्यकाभन्दा बाहिरका विद्यार्थीले पनि निशुल्क डाक्टर पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने लगायत खालका माग जाहेज हुन् । तर वर्तमान अवस्थामा अधिकांश मेडिकल कलेजहरु वामपन्थी सरकारको नियन्त्रणमा रहेका कारण त्यो मागप्रति सरकार पटक्कै मान्न तयार देखिदैन । वामपन्थीहरु मेडिकल कलेज आफु अनुकुल राख्न चाहन्छन् । उहाँहरुको पार्टी चलाउनेदेखि कार्यकर्ता भर्ने केन्द्रसमेतको स्रोत बनाइएको छ । त्यो स्रोतलाई उहाँहरु तलमाथि बनाउन चाहनुहुन्न । तर हामीले पनि भन्दै आएको कुरा गरिब नेपाली छोराछोरीले पनि निशुल्क अथवा सुलभ मुल्यमा पढ्न त पाउनुप¥यो नि ?
तर प्रा.डा. गोविन्द केसीले विगतमा भएको सहमति अनुसार विद्येयक नआएसम्म सत्याग्रह जारी रहन्छ भनेर भन्नुभएको छ नि त ?
माफिया पोस्ने ऐन पक्कै पनि बनाउनु हुँदैन । जनताको हितमा ऐन नियम बनाउनुपर्छ । गरिब जनताका छोरा–छोरीहरुले पनि मेडिकल कलेजमा शिक्षा लिन पाउन भन्ने हाम्रो चाहना हो । मेडिकल कलेजलाई हाम्रो नियन्त्रणमा राखेर केही मेडिकल कलेजलाई मात्रै ध्यानमा राखेर मुलुकको राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्नुहुँदैन । त्यसरी उठाएको कतिपय कुराहरु सेन्सेटिभ छन् । त्यसलाई कसरी हामीले सन्तुलनको बाटोमा लिएर जाने भन्ने कुरा हो । यो विषयमा हामीहरु छलफल गरे हेरेर पार्टीको पोजिसन लिने भन्ने कुरा तय गर्छौ ।
अहिले सांसदको पिएलाई नागरिकताको फोटोकपी लिएर जागिर दिने प्रथा ठिक हो, तपाई के भन्नुहुन्छ ?
यो कुरामा सरकारले एकदम गलत गरेको छ । पिए राख्ने भनेको कन्फिडेन्सियल कुरा हो । आफ्नो विश्वास पात्र राख्ने हो । कतिपय मान्छेहरुले यो गर्नुभएको भए यसलाई उहाँहरुले सच्याउनुहुन्छ । मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले ने.वि संघको जिल्लाको उपाध्यक्षलाई राखेको छु ।
तपाईले चाँही आफ्ना छोराछोरीलाई पिए राख्नुभएको छैन, पहिले मन्त्री भएको बेलामा राख्नुभयो होला नि ?
म एकदमै सचेत थिए । म सिंचाइमन्त्री हूँदा पनि मैले गरेको कामहरु जगजाहेरै छ । यस्तो कुरामा म एकदमै कन्सियस छु । वास्तवमा हामी पब्लिक फिगर हो । हाम्रो जनताप्रतिको जुन दायित्व छ, त्यसले गर्दा हामीहरु जिम्मेवार बन्नुपर्छ । संसदको गरिमामय भूमिकालाई निष्कृय गर्ने खालको कुराहरु पनि गर्न हुँदैन । मिडियाले पनि भन्न र लेख्न पायो भन्दैमा जे पनि गर्न हुँदैन ।
संसदको गरिमा, मान्यता जति बढ्यो त्यतिनै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । त्यसैले सबै नेता खराब, संसदनै खराब भन्ने खालको सोंच आउनु ठिक होइन । यो एकदमै गलत कुरा हो ।
तर सांसदका पिएलाई शाखा अधिकृत सरहको सुविधा दिएर संसद सचिवालयले उनीहरुबाट नागरिकताको फोटोकपी मात्र लिने काम राम्रो हो त ?
सासंदको एउटा व्यवस्थित सचिवालय हुनुपर्छ, सांसदले देशको अवस्थालाई अपडेट गरेर बस्नुपर्छ, हरेक घटनामा उनीहरु अपडेट हुनुपर्छ । मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा उनीहरुले एउटा सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यसैले एउटा सांसदको यत्रो भुमिका हुने हुँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । त्यसैले जसको घर छैन, त्यसले न्यूनतम पारिश्रमिक तलब पाउँछ, त्यो घरभाडा पुग्छ ।
अहिले १७÷१८ हजार रुपैयाँ घरभाडा लाग्छ ? ६० हजार तलबले एउटा सांसदको काठमाडौंको सारा व्यवस्थापन हुन्छ ? सांसदहरु माइक्रो बसमा चढ्छन् । पब्लिक भेहिकल प्रयोग गर्छन् । संसद जान आउनमा समस्या छ ।
२०७५ पुष ३०, ०८: ५३: २६
नयाँ विकल्प काठमाडाैं- विद्यार्थी राजनीतिबाट खारिएका जुझारु नेता हुन् मोहनप्रसाद बराल । जनताको कामप्रति सधैं दत्तचित्त भएर लागिपर्ने बराल नेपाली...